» “गुगलमा ‘फटाहा’ सर्च गर्दा, किन आउँछ, प्रधानमन्त्री देउवा,को नाम ? “गुगलमा ‘फटाहा’ सर्च गर्दा, किन आउँछ, प्रधानमन्त्री देउवा,को नाम ? – हाम्रो खबर
“गुगलमा ‘फटाहा’ सर्च गर्दा, किन आउँछ, प्रधानमन्त्री देउवा,को नाम ?
2021, July 20th, Tuesday
हाम्रोखबर संवाददाता 435 Views
“काठमाडौं – प्रविधिको दिग्गज कम्पनी गुगल सर्च इन्जिनमा तपाईंले यति बेला नेपालको फटाहा अर्थात (Fataha of Nepal) भनेर सर्च गर्नु भयो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नाम अगाडि आउँछ ।”
“देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको दुई दिन पश्चातबाटै गुगलमा ‘फटाहा इन नेपाल’ अथवा ‘फटाहा अफ नेपाल’ भनेर सर्च गर्दा उनको नाम र फोटो देखाउन थालेको हो । यसको कारण के हो त ? के गुगलमा देखिएको यस्तो घटना यो नै पहिलो घटना हो ?
“पक्कै पनि होइन । किन भने यसअघि पनि गुगल एल्गोरिदमको त्रुटीको कारण यस्ता थुप्रै घटना भएका छन् । सन् २०१८ मा ‘इडिएट’ भनेर गुगलमा सर्च गर्दा अमेरिकाका तत्कालिन राष्ट्रपती डोनल्ड ट्रम्पको तस्वीर देखाउने गरेको थियो ।”
“जसले गर्दा गुगलले अमेरिकी कंग्रेसको न्यायपालिका समितिमै त्यसको जवाफ दिनुपरेको थियो । त्यस्तै सन् २०१९ मा इमरान खान पाकिस्तानको नयाँ राष्ट्रपतिमा नियुक्त भएसँगै उनीमाथि पनि त्यस्तै घटना भएको थियो ।
“त्यतिबेला गुगलमा ‘भिखारी’ भनेर सर्च गर्दा पाकिस्तानी राष्ट्रपती खानको फोटो देखाउने गरेको थियो । सन् २०२० मा अफगानी क्रिकेटर रासिद खान र भारतीय नायिक अनुष्का शर्मालाई जोडेर गुगलमा त्यस्तै घटना घटेको थियो ।”
“त्यतिबेला गुगलमा ‘रासिद खान वाइफ’ अथवा ‘वाईफ अफ रासिद खान’ भनेर सर्च गर्दा अनुष्काको तस्वीर देखाउने समस्या थियो ।”
“यस्ता विषयमा सम्बन्धित निकायले उजुरी दिएपछि गुगलले तत्कालै यसलाई सच्याउने गरेको पनि गरेको छ । तर, यसरी कुनै शब्दसँग जोडेर व्यक्तिलाई देखाउनुको पछाडिको कारण के हो त ?
“त्यसैका आधारमा गुगलले उत्कृष्ट परिणाम प्रस्तुत गर्ने गरेको उनको स्पष्टीकरण थियो । कुनै एक व्यक्तिले चाहेर गुगल सर्चको रिजल्ट फरक पर्ने होइन ।”
“कुनै समूहले चाहेर मात्र पनि हुने होइन । किन भने यसमा धेरै चरणहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रयोगकर्ताले के गरिरहेका छन् भन्ने विषयले निर्धारण हुने कुरा पनि पिचाईले बताएका थिए । टेकपानाको सहयोगमा